कालीगण्डकी लोकमार्ग : पर्वत खण्डको काम अलपत्र
पर्वत । कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्ड विस्तारको काम अलपत्र परेको छ । ट्र्याक खोलेर सकिने बेलासम्म ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले कोरिडोरको काम रोकिएको हो । स्याङ्जाको मिर्मीबाट पर्वतको मालढुंगासम्म ५५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सूर्य कन्स्ट्रक्शन प्रालिले २०७३ असार २२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार २०७५ जेठ २१ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कार्यान्वयन भएको छैन । पर्वत खण्डमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम बाँकी छ । काम अलपत्र पारेपछि आयोजना कार्यालय ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छ । कम्पनीले रू. ९ करोड १७ लाख ४९ हजारमा निर्माण सम्झौता गरेको लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, पाल्पाले बताएको छ ।
ट्र्याक खोलिएको ठाउँमा पनि गाडी गुड्ने अवस्था छैन । बर्खामा सबै सडक भत्किएको छ । उक्त खण्डको फलेवास ढिकदेखि मोदीवेणीसम्म ट्र्याक खुले पनि सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । यस्तै मोदीवेणीदेखि अर्मादीसम्मको ३ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छैन । ‘सडक अलपत्र पार्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ फलेवास–४ का कृष्णप्रसाद लम्सालले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा लापरबाही गर्नेलाई कुनै हालतमा छूट दिनुहुँदैन ।’
निर्माण कम्पनीले काम शुरू नगरेपछि २०७६ जेठ ४ गते १० प्रतिशत जरीवाना सहित म्याद थप गरिएको थियो । प्रतिदिन रू. ४५ हजार ९०० का दरले जरीवाना लगाएर म्याद थप गरिएको ४ महीना बितिसके पनि अझै काम पुनः सञ्चालन भएको छैन । आयोजनाको कार्यालयले पत्रिकामा सूचना निकालेर कम्पनीको खोजी गर्ने तयारीमा छ । ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म करीब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ भने ३ करोड १७ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयले बताएको छ । पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि कम्पनीले काम शुरू नगरेको आयोजना प्रमुख नगेन्द्र सुुवेदीले जानकारी दिए । ‘ठेकेदारलाई दैनिक जसो सम्पर्क गरेर काम थाल्न ताकेता गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘काम शुरू नगरे कानून बमोजिम कारबाही गर्छौं ।’
सूर्य कन्स्ट्रक्शनका सञ्चालक सूर्यबहादुर खड्काले विभिन्न समस्याका कारण केही समय ढिलाइ भएको भन्दै आगामी पुस १५ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘वर्षायाम भएकाले काम सुचारु गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । केही स्थानमा स्ट्र्याक खोल्ने र ग्राभेलिङको काम मात्र बाँकी रहेकाले ३ महीनाभित्र सम्पन्न हुने दाबी उनले गरे । राष्ट्रिय गौरवको योजना लामो समयदेखि अलपत्र पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि कम्पनीले काममा फर्किने बताएको हो ।